Isiokwu - Nledo Igwefoto - OMG Solutions
Category Archives: Isiokwu - Nledo igwefoto
Ndụmọdụ iji jide ndị na-azọ di na nwunye n'ịghọ aghụghọ ule na Digital Voice
Needed mgbe mkpa ka anya na gị na onye òtù ọlụlụ ihe omimi ekwentị mkparịta ụka? Zụta obi umeala (n'okpuru $ 120) onye na-edekọ olu dị elu ga-elekọta nsogbu gị. Understmụ akwụkwọ na-ejikarị ndị ndekọ a edekọ klas ha, ma ọ bụ ndị edemede mgbe ha na-eduzi nzukọ. Ọ dị ka ihe ndị ọrụ nzuzo na-ewebata n'ụlọ gị ma ọ bụ ụgbọ ala, dịka ihe ị na-ahụ na ndị na-ese ihe nkiri TV.
Ọ bụrụ na ọ bụghị oke nsogbu cheta tupu ịmalite itinye anya na onye ndụ gị na ngwaọrụ, gụọ ndị nkwuputa na saịtị ndị na-ere gị ngwa ma kwụ n'ahịrị na ị na-enyocha iwu obodo agbata obi gị maka ịlele ma ọ bụ dekọọ mkparịta ụka.
Mgbe ị na-achọ onye na-edekọ ụda, kwuo otu ihe iji chọpụta otu nwere ikike AVR (olu etinyegoro ụda olu), ma ọ bụ oge ndekọ gafere oge; ndị na-edekọ olu dị ọnụ, $ 100 +, na-enye ohere ruo 500 + ogologo oge ndekọ. Na ohere gbanwere na ị nọrọ n'ụgwọ ego, ọ dị gị mkpa n'ezie ụda olu edekọtara.
Kama nanị tinye n'ọrụ nnukwu ihe ndekọ olu na-echekwa ngwa ngwa, ịnwere ike iji olu a na-edekọ edekọ ka ịdekọ mkparịta ụka ekwentị nke onye ọlụlụ gị na-ezere gị. O doro anya na nnukwu ihe ndekọ kọmpụta nwere nnukwu ihe na-enwe ihe ngosi AVR, yana enwerekwa ndị na-edekọ ekwentị, ndị akọwapụtara nke ọma maka ekwentị. Achọpụtabeghị m olu ndekọ ekwentị na-eme ka edebe ekwentị, n'ihi ya enweghị m ike idepụta ihe ọ bụla; ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ndị na-edekọ ekwentị m achọpụtara na-achọ ka onye ahịa ahụ bido ikike ndekọ, ma ọ bụ kpoo ha mgbe emechara akụkọ ihe mere eme.
Ọ bụrụ na ịchọọ ngwa ọrụ aka gị nke ị na - edekọ mkparịta ụka, cheta na enwere nnukwu ọdịiche n'etiti ndị na - ekwu okwu olu dị elu na ndị na - edekọ olu olu PC.
Gini mere iji jiri Ndekọ olu N'elu Ndekọ Ekwentị?
Ebe ụda olu ekwentị PHONE (ruo n’uche m na amazonụ na-eme ka m mara), kpatụ onye ahịa ekwentị aka na akaụntụ ahụ, ma chọọ ọrụ ntuziaka tupu ngwa ahụ edekọ ihe ọ bụla.
Ezie na onye na-edekọ olu olu nwere AVR na-edekọ ihe ọ bụla ma ọ bụrụhaala na ọ na - achọpụta ụda.
Tụlee ya dị ka igwefoto na-acha uhie uhie na-edekọ ihe niile (onye na-edekọ olu nkịtị), VS zoro ezo igwefoto nwere ike ịdekọ mgbe ọ na-achọpụta ọdịiche (olu na-edekọ olu na AVR) igwefoto VS nke chọrọ onye ahịa ya ka ọ pịa akara ndekọ uhie.
Naanị ịkwagide ya nke nta nke nta, ndị na - edekọ olu na-aga n'ihu adabaghị na ndị na - edekọ olu olu PHONE.
Ebee ka m kwesịrị izochi ihe ndekọ olu m?
Onye gị na ya na-ebi ndụ ọ̀ na-arụ ọrụ n’ụlọ? Ebe kacha mma imefu ya bụ n'okpuru ụgbọ ala ha, ma ọ bụ na agbanyụrụ ohere na ị nwere otu n'ime oche oche ndị ahụ na-eji akpa na azụ, pịa ya ebe ahụ naanị smidgen n'okpuru akpa. kwupia aka kpoo ya tupu ha were ugbo ala a maka oru, na ohere a na-ebido gi na AVR, ma ogba enwe isi gi na oghaghi abịa.
Dika ndi okacha amara nke ndi mmadu kwuru, ndi n’eme otutu ihe n’enwe mkparita uka ha mgbe ha n’a aru oru, na ilaghachi ulo, na onodu na ha na ndi ozo ha agaghi ezukọ na ubochi ahu. Ọ bụrụ na ịnweghị ike izochi nke a na ụgbọ ala ha mgbe niile, gbalịa ime nke a n'oge etiti izu, mgbe ha na-eleghara anya. Ọ bụrụ na ị zụrụ ihe dị oke ọnụ, dịka obere ndekọ olu, ị nwere ike ịnwale zoo ya na pọtụfoliyo ha ma ọ bụ na ngwongwo ha, agbanyeghị nke ahụ dị oke egwu dị ka m ga-achọ iche.
Onye gị na ya na-ebi ndụ ọ̀ na-anọ n'ụlọ? Ebe kachasị mma iji nweta nwunye na - atụgharị nwunye ma ọ bụ di na nwunye n'ụlọ dị nso na ekwentị, PC (skype ma ọ bụ ngwa voip ndị ọzọ), ma ọ bụ akwa (mgbe ha họọrọ ekwentị). Tụlee ịnweta ndekọ abụọ dị ala kama ịbaghị otu karịa ka ị ga - ekewa ya wee nyocha ụlọ niile.
Ọ bụrụ na ịnwe ụgbọ ala ọzọ n'ụlọ ị kwesịrị ịtụle ihe mgbakasị ahụ na site na iji ngwa ọrụ nzuzo gị, ị nweghị ike ijide n'aka ma onye ọzọ dị mkpa ma ọ bụ onye ọlụlụ ọ ga-anọdụ n'ụlọ mgbe ị hapụrụ ọrụ.
Spec tulee di ma ọ bụ nwunye gị na-enwe oku mgbede 12 PM? Ebe kachasị mma iji chekwaa ngwaọrụ gị dị n'ime ime ụlọ mposi. Na ohere na ịmara ebe ha nọ, ikekwe ha kpọchiri n'ime ụlọ ndị ọbịa, ị nwere ike ịga zoo ya ebe ahụ; ma ọtụtụ ihe ngosipụta nke duping na-ezo aka n'ụlọ mposi, ebe ọ bụ na ọ naghị enyo enyo ịhụ onye ibe na-ahapụ ụlọ ịsa ahụ na 12 PM maka ile ha ka ọ banye n'ime ụlọ.
Echeghị m na ị ga-emesi ike ma ọ bụrụ na onye na-edekọ olu gị dị oke ma ọ bụ na ọ bụghị, n'ihi na m na-agụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nyocha niile tupu m zụta ihe ọ bụla na weebụ, ọ bụrụhaala na ọ nọ n'ime ụlọ yiri nke ahụ bulie ụda (azụrụ m nke dị ọnụ ala btw). Ime ụlọ anyị ebe a bụ 20 × 15 ụkwụ, gbalịrị n'ime ụlọ ahụ, na-arụ ọrụ pụrụ iche, nwaa n'ime ụlọ ịsa ahụ, na-arụ ọrụ dị elu.
Nyochaa Ndekọ ahụ:
Mgbe ị tụlere ụda a na-agụrụ ụda, ọkachasị mgbe ị na-edekọ n'ime ụgbọ, hụ na ịchọrọ ntanetị na ndekọ ụda ka ị lekwasị anya n'okwu mmadụ.
N'ime usoro ndị a, ị ga-ere obere oge ma kwere gị nkwa na ị ga-enweta ihe akaebe.
Jisie na obi ụtọ nnyocha!
Kachasị Elu Voice nke SPY kacha zoro ezo nke SPY maka nlekota Onye aghụghọ na-enyocha ya
Taa ọ siri ike ịchọta ezigbo onye gị na ya raara nye n'aka. Agbanyeghị, anyị enweghị ike iji anya gba ọtọ na ibe gị na-akwado gị ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata, ịnwere ike iji igwe okwu igwe okwu na-esochi di na nwunye gị ma chọpụta ihe eziokwu bụ.
SPYV018 - AKOTB DEVR DEV CB SIMR SIM CB SIMR SIM SIM Kaadị:
Anyị niile maara asụsụ ma ụzọ di gị ma ọ bụ nwunye gị si ekwu okwu na-egosipụta ọtụtụ ihe banyere ebe ha si. Mana iji hụ na nke a, ị ga-agba mbọ hụ na ị na-elele omume niile onye gị na ya na-eme ma na-elekwa etu nwunye gị na-esi ekwu okwu ọbụladị mgbe ị na-anọghị. Maka ebumnuche a, SPYV018 bụ ngwaọrụ kachasị mma na-apụ apụ na-enweghị mgbagha ọ bụla. Ugbu a, gịnị ka ntakịrị ihe a na-eme? Ọ nwere ike ịdekọ ụda nke ọma yana setịpụrụ gị vidiyo ma chekwaa ya na kaadị SD nke enwere ike ịsacha elu ruo 32gb! Ọbụghị naanị nke ahụ kamakwa ọ na - abịa mgbochi mmiri ọ bụrụgodi na ọ bụrụ na di gị ma ọ bụ nwunye gị achọọ ihe otu mgbe wee tufuo ya. Kwesighi ichegbu onwe gị ka ọ ga-eme otu ihe ahụ ozugbo ị wepụrụ ya. Nwere ike tinye ya na mpaghara ọ bụla nke ụlọ iji lelee onye ahụ kpọmkwem ka ị na-arụ ọrụ na ebumnuche nkịtị dịka ijide n'aka na ha anaghị eri ihe na-emerụ ahụ ma ọ bụ na-eme ihe ọ bụla nke nwere ike itinye ha na nsogbu. !
SPYV022 - POWERBANKS VOICE VOICE:
Na afọ nke ugbu a na-eto ma na-akawanye nká, ọ na-esiri gị ike ilebara ụmụ gị ma ọ bụ onye gị na ha hụrụ n'anya anya na ijide n'aka na ihe ọ bụla ma ọ bụ onye nwere ike imebi omume ha ma ọ bụ zụta ha n'aka gị. . Ga-agba mbọ hụ na ha na-anọ n ’anya gị nke oge niile maka ịdị jụụ na ha nọ n’aka ọma, mana. Gini ga-eme ma I kwere ka ha nwere nnwere onwe zuru oke ma ka na-agba mbọ hụ na ha nọ n'aka nri? SPYV022 bụ naanị ihe maka gị mgbe ahụ, nke a bụ ikike akụ ụda olu ndekọ akụ. Ejiri batrị nke nwere ike ịdekọ ruo awa 600 ogologo oge na-enweghị ịkwụsị ọ bụla. Ọbụghị naanị nke a kamakwa ọ na enyere gị aka ịrụ ọrụ zuru oke dịka ngwaọrụ a nwere ike ịdekọ ruo ọsọ ọsọ 192kbps na-eme ma ọ bụ jiri ọsọ rụọ ọrụ ederede rue Ilya 32gb ebe nchekwa. Nke ahụ dị mma, ịkwesighi ịga n'ihu ma lelee anya maka kaadị SD mgbe ịzụrụ ngwaahịa a!
SPYV027 - HIDDEN VOICE AKORDRER:
Ugbu a, gịnị ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọghị ịbanye n'ihe pesky dị ka ekwuputara ebe ahụ na isiokwu naanị maka ịhapụ onye ị hụrụ n'anya? Ọ bụrụ na ọ bụ ikpe karịa na SPYV027 bụ naanị ihe maka gị. Can nwere ike itinye obere ngwaọrụ a na ntụpọ ụlọ ọ bụla, ọ bụrụ ụlọ, ma ọ bụ ebe ọha na-agba ma zuo ike ebe ọ bụla ịchọrọ na ebe ị ka na-ahụ n'aka na ị na-agbanye ụkwụ na ibe gị ma mara nke ọma maka omume ha. ndi ozo ma obu ndi mmadu ndi ha na ha bi! Ngwa ahịa a nwere ike idekọ ruo ihe dị ka awa 600 kwụ ọtọ na-enweghị ịchọ ọ bụla ma ọ bụ rụọ ma ọ bụ tinye vidiyo ahụ n'ime naanị oge ole na ole. Ọ na - esonye ya na ebe nchekwa 8Gb nke etinyere na ya na-ejide n'aka na ị nwere ike ichekwa nchekwa ịchọrọ maka ịrịọ ozugbo ị zụrụ ngwaahịa a. Yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị maka ịme ka nwa nwoke ma ọ bụ nwa agbọghọ ahụ banye n'ime aka ọjọọ ọzọ dịka ọbụlagodi na anya gị enweghị ike ịhụ ihe ndị ahụ enwere ike, ngwaọrụ a ga - agba mbọ hụ na ịnwere ike ịnụ ihe ha ma mara ihe ha abanye. mgbe zoro ezo n'ihi ogo nke ya!
SPYV015 - MINI KEYCHAIN ​​VOICE Ndekọ:
Ọ bụrụ na ọ dị gị ka onye hụrụ gị n'anya abanyela n'aka na-adịghị mma ma ọ bụ nwee obi abụọ na ụzọ ụfọdụ omume gị siri dị ka ọ ga-akpasu ha iwe ma ọ bụ ọ bụrụ na ha na-eso ndị mmadụ na-emekọrịta ihe, ha ekwesịghị ịdị. Echegbula onwe gị, ngwa a na-ekpuchi ya dịka mmadụ nwere ike. The SPYV015 bụ obere igwe edekọ olu olu Keychain ị nwere ike inye onyinye maka ibe gị ma ọ bụ onye ọ bụla ịchọrọ ma nwee ntị zuru oke n'ihe ọ bụla ha na-ekwu ma ọ bụ ihe ha na-abanye mgbe ọ bụla ha na ya. Onye obula nwere ugboala ubochi otu a ya mere ogagh abu nsogbu diri ha inwe nke a ma gi onwe gi, site na iji ngwa a, inwere ike inweta uche zuru oke banyere onye ahu gi na ya na-e? imetụ ụdị na ụdị omume ha na-eso ndị mmadụ mgbe ọ bụla ha na-agaghị erukwa gị nso. Ngwaọrụ a juputara na batrị gafere elekere 28 na-emesi gị obi ike na ị ga-echegbu onwe gị maka ihe ọbụla n'agbanyeghị na ị hapụla ka Keychain nọrọ otu awa ma ọ bụ ọ bụrụ na onye ị hụrụ n'anya apụla n'azụ ụgbọ ahụ ebe Keychain nọ ntakịrị ntakịrị oge. Enwere ike ịtụ ụgwọ ya na oge ọsọ ọsọ nke elekere 1, yabụ ịkwesighi ichegbu onwe gị na ịchọta sọks maka ya oge niile!
SPYV003 - DIGITAL VOICE AKORDKỌ:
N'ime ndị ndekọ niile nke anyị gosipụtara n’elu, nke a ga-abụrịrị onye kachasị ọfụma n'ihi oke kọọrọ ya dị ịtụnanya yana oke egwu batrị ọ na-enye na-enweghị nkwụsị gị. Nke ahụ ziri ezi, SPYV003 na-abịa oge ndekọ ruo oge 280 awa n’atụghị anya n’enweghị oge ọ bụla, ị nwere ike ijide n’aka na onye ọ bụla inwere ngwaọrụ a maka ebumnuche nche ma ọ bụ ka ọ hụ ka ha na ndị ọzọ, ha na eme ihe ndi ozo. Ọ bụghị ha ga-echegbu onwe ha banyere chaji ya oge niile! Ọbụghị naanị nke a, ọbụlagodi mgbe etinyere ngwaọrụ a na ịjaji ị ka nwere ike iji ya dekọba vidiyo gị wee mee ka obi sie gị ike na anya gị ma ọ bụ n'akuku niile na-eme ntụpọ. Ọ bụkwa USB retractable yabụ na ị gaghị enwe nchegbu banyere ya na-efufu oge ọ bụla ma ọ bụ ihe, ọ dakọtara na ma pc na Mac ya n'agbanyeghị etu onye ọrụ ị ga - esi nwee ike rụọ ọrụ na ngwaọrụ a naanị -agwu.!
SPY013 - PEN VOICE AKORDKỌ:
Dịka anyị niile mara, oge ọ bụla ị na-eche na ị ga-elebanye anya n'ihe niile na-eme na ntanetị, ọ bụ ụfọdụ ihu ọha, ma ọ bụ ụlọ a ka masịrị. Wantchọrọ ijide n'aka na ngwaọrụ ị na-eji na-apụ n'anya n'anya nkịtị ma ọ bụ na ị ga-enweta ihe na-agwakọta na ngwakọta ndị ọzọ na-eme gburugburu ememe ahụ maka nzube ahụ, ị ​​nwere ike ịga na SPYV013, gịnị bụ ihe pụrụ iche gbasara Ngwa a mara mma bụ na ọ na-eyiri uwe dị ka otu n'ime ihe ndị kachasị adị na nke bụ .. A pen, ugbu a onye ga na-eche na mkpịsị odee dị mfe dị ka onye na-edekọ olu na nke dị oke mma na ya enwere ike idekọ ruo ogologo oge 20 ogologo oge na-enweghị kwụsịtụ?! Ọ na - esonye ya na ebe nchekwa 8 Gb wuru, yabụ ịkwesighi ichegbu onwe gị gbasara nchekwa ahụ n'ime awa ndị 20 pesky ahụ. Ngwaọrụ a zuru oke ma ọ bụrụ na ị na-achọ onye ma ọ bụ nwa gị nke na-azụ ahịa ma ọ bụ nwa akwụkwọ. Dịka mgbe ahụ ị nwere ike inye ha mkpịsị odee a ma ọ bụ tinye nke a n'ime igbe ha iji jide n'aka, ị na-edekọ oge niile nke ihe ọ bụla ha nọ ma ọ bụ ihe ha na-ekwu maka n'agbanyeghị ebe ha nọ!
Obi abụọ adịghị ya na ngwaọrụ USB abụrụla otu n’ime ụzọ ndị kachasị sie ike isi na-ebugharị ihe site na kọmputa gaa na nke ọzọ, ha dị fechaa, ma ịnwere ike iburu ha ebe ọ bụla n'agbanyeghị na ị na-echegbukarị ohere dị ka ị nwere ike ịbanye ha na jeans gị. akpa! Ma ọ bụrụ na, Otu USB na-eme ka ị were ebe niile nwere ike obi sie gị ike idobe nchekwa gị yana onwe gị. Nke ahụ ziri ezi, nke a bụ ebe SPYV009 na-eme ntinye ya! N'ihi ọdịdị USB nke mbanye USB, ị ghaghị ichegbu onwe gị ka ị hụ ya na onye na-edekọ ihe ọ bụla n'agbanyeghị egwuregwu ma ọ bụ oge ị nọ. Ebe ọ bụ na ọtụtụ mmadụ na-abanye na kọmputa kọmputa ụbọchị ndị a, ha ji n'aka na ha ga-enwerịrị, ọ bụrụ na onye ị hụrụ n'anya ma ọ bụ onye ị hụrụ n'anya na-aghọ aghụghọ ule. Bingo, yabụ ọ bụrụ na inwe obi abụọ na onye gị na ya so na nke ahụ nọ na nri ọ na-ekwesịghị ịbụ ma ọ bụ nwee ezigbo anya na mgbe ha nọ n'èzí, ha nwere echiche dị iche iche n'ebe ndị mmadụ nọ karịa na nke a nwere ike ịbụ ihe ahụ. nke ịchọrọ iji mesie ha obi ike wee lebara ha anya na-anọghị ha nso ma ọlị. O nwere ike dekọba ihe niile dịka igwefoto ma na-ekwe nkwa na agbanyeghị ihe na-eme na Ebe a, a na-achịkwa ya site na iji ụda olu ya!
SPYV012 - AKW PKWỌ MAKA MAKA VOICE:
Obi abụọ adịghị ya na ụmụ agbọghọ bụ ihe ndị siri ike ịchịkwa ma a bịa n'ụwa nke taa dịka ọtụtụ ndị mmadụ na - eme ugbu a na - achọkarị nwa agbọghọ ha ga - emekọrịta ihe ma ọ bụ nwee. Iji hụ na onye gị na ya bi adịghị ada maka ụdị ihe ahụ ma ọ bụ burula enyi onye ya na ya na-ekwesịghị isoro. Nke a bụ otu Ngwa kachasị mma ị nwere ike ee, SPYV012. Nke a nwere olu na-edekọ ụda bụ otu oku nke ịma mma ya yana yana nnukwu olu ndekọ olu dị ka aha ahụ na-ekwu. Naanị na-enye ya onye ọ bụla ịchọrọ ilele, ha ga-anabatakwa ya na obi zuru oke n'ihi ụdị ọmarịcha ọ na-ele n'ime ọkwa ya nke mma. Ihe a nwere ike iru ihe ruru 5 ogologo oge na-enweghị mkpa maka ụgwọ, yabụ ịkwesighi ichegbu onwe gị gbasara iwepu okwu pinpoint ebe a ma ebe ahụ. Enweela ebe nchekwa 8 GB wuru yana nke na -eme ka nchekwa data zuru oke maka ya ka ọ rụọ ọrụ na-enweghị nkwụsị. Nke a bụ otu onyinye mara mma nke na-eme ma, chekwaa nwa gị ma jide n'aka na ha nọ n'aka nri n'agbanyeghị ebe ha nọ.
SPYV020 - OMG BADGE DIGITAL VOICE AKORDKỌ:
Onye ọ bụla hụrụ ya n'anya ịnweta obere baajị pin ha nwere ike iyi mgbe niile, ekwere m na n'agbanyeghị ihe ị bụ na anyị nwere ike ịdị. Inye ha obere ihe ndị mara mma ga-eme ha obi ụtọ ma mezue ụbọchị ha. Ọ bụrụkwanụ na anyị gwara gị na ịmebe ụbọchị ha, ị nwekwara ike ịme nke gị? Ee, n'ihi na SPYV020 na-abịa na ndekọ olu olu nke ime nwere ike ilebara onye ị hụrụ n'anya anya ma kọọrọ gị ihe niile gbasara onye ha na ha na-akpakọrịta ma ọ bụ ihe ha na-eme ọ bụrụgodị na ị naghị anọ ha nso. Ọbụghị naanị na nke a ga - eme ka ị ghara ịbụ nne ma ọ bụ nna na - atụ ụjọ site na ịnọkarịkwa onye gị na ya na - akpakọrịta n'oge niile ma ọ bụ ihe ọzọ iji mee ka ha pụọ ​​na nsogbu, mana ọ na - emekwa ka ọdịmma oge na - aga n'ihu! Ọ na-edekọ n'ụdị olu WAV ma jiri 8gb nke ebe nchekwa na -echekwa ihe na-eme ihe dị oke mkpa ma na-enyekwa nchekwa ị nwere ike ịrịọ maka!
SPYV027 - AKIDR H HIDDEN VOICE
Nke a bụ n'ezie ngwa ahịa dị ịtụnanya mgbe ịchọrọ ịdekọ ihe niile na - eme n'otu ebe ma gbaa mbọ hụ na ị nweghị ka ọ bụ nwoke ọjọọ na - eguzo na ndò na - anụ ihe onye hụrụ gị na - ekwu ma ọ bụ na - ekwu maka ya. SPYV027 na-enye ọkwa dị nzuzu dị ka nke ọma yana oge batrị iji mee ka obi sie gị ike mgbe niile na ịchọrọ naanị maka mkpa ọ dị maka ilekọta ibe gị, ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ ị chere na ọ nwere ike imerụ ahụ ma ọ bụ imerụ enyi n'oge a. Ọ bụrụ na onye gị na-achọ izere ndị niile na-eme nzuzu Ngwa ha, mgbe ahụ, nke a bụ naanị otu ihe ị chọrọ maka obi ike na onye òtù ọlụlụ ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ na-anọgide na-ahụghị kpamkpam. Ọ na-emesi gị obi ike na ị ga-anọpụ n'anya n'anya onye ọ bụla ọzọ n'ihi atụmatụ dị gịrịgịrị na-enweghị atụ!
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji teknụzụ arụ ọrụ iji nyochaa ndị ọrụ
Nyochaa ndị ọrụ bụ ojiji nke usoro dị iche iche n’ụlọ ọrụ, yana ebe ọrụ ndị ọzọ iji nakọta ozi gbasara ọrụ na ọnọdụ nke ndị ọrụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbaso teknụzụ kachasị ọhụrụ iji nyochaa ndị ọrụ iji melite arụmọrụ ma chekwaa ụlọ ọrụ. Ebumnuche bụ isi gbochie omume anaghị anabata n'ebe ọrụ.
Nwere ike gị n'ọrụ were ledoo gị na-arụ ọrụ?
Iwu nke iji igwefoto zoro ezo
Enweghi nha anya n'etiti nrụnye iwu na iwu na-akwadoghị nke igwefoto zoro ezo taa bụ ihe na-aga n'ihu na-agbagwoju ndị mmadụ anya na United States America ma ha na-ajụ maka ọnọdụ nke iwu nke iji igwefoto zoro ezo. Ebumnuche maka nke a bụ na oge mgbe igwefoto zoro ezo ghọrọ iwu na-akwadoghị nwere ike ịbụ mpaghara ntụ ntụ. Ala ọ bụla nke United States of America nwere ụkpụrụ na iwu ya banyere iwu nke igwefoto zoro ezo, na-eme ka o sie ike izugbe nrụnye ngwaọrụ elekere. N'ikwu ya n'ozuzu, ọ bụghị iwu na-akwadoghị idekọ onyunyo onyunyo na igwefoto onyunyo na ebe ọha ma ọ bụ n'ụlọ gị na-enweghị ikike nke onye ị na-edekọ. Agbanyeghị, a ga-agbaso ụfọdụ ịhapụ iwu, ma ọ bụ ọ ghọrọ iwu na-akwadoghị. Mara nke a na iwu obodo gị ga-eme ka ọ dịrị gị mfe ikpebi ma ọ bụrụ na ntinye igwefoto nche gị ziri ezi na iwu ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ma ị na-etinye usoro nchekwa gị, na-etinye igwefoto n'ọnọdụ ọrụ gị, ma ọ bụ na-atụle ntinye igwefoto na mpụga nke akụ gị, o yikarịrị ka ọ ga-eju gị anya ma ọ bụrụ na ị na-emebi iwu ọ bụla na usoro ahụ. Havekwesiri imelite ndị mmadụ ma ọ bụrụ na ha nọ n'okpuru onyunyo igwefoto? Enwere ebe ole na ole iwu akwadoghị mgbe etinyere igwefoto? Want chọrọ n'ezie ịkụziri onwe gị na iwu nke itinye igwefoto zoro ezo, iche na mpụ nke ịbụ onye ejidere n'ụzọ na-ezighi ezi na ndị mmadụ agaghị eme nke ọma maka ịga n'ihu.
Anyị ga-ahụ ebe kachasị hụkarị itinye igwefoto, yana mgbe enwere ya akwụkwọ iwu megidere iwu akwadoghị.
Iwu nke Nzuzo:
Iwu kwadoro nke nnyocha bụ ma okwu metụtara omume. N'agbanyeghi na iwu gọọmentị etiti na-elekarị nledo dị ka iwu, enwere ndị atụ mgbe nledo ghọrọ iwu na-akwadoghị. Ltọgbọ igwefoto zoro ezo na nzuzo ma ọ bụ maka ebumnuche ịkpọasị na-eme ka ojiji nke igwefoto zoro ezo ezighi ezi. Ebe ọ bụ na steeti dị iche iche nwere iwu dị iche iche gbasara ojiji nke onyunyo na teknụzụ ị ga-agbanyerịrị na iwu ndị a na steeti gị. N'ebe ndị zoro ezo dịka ụlọ ịsa ahụ, ọ bụ ihe iwu na-akwadoghị iji igwefoto nledo dịka ndị ọrụ mpaghara ndị a nwere atụmanya ezi uche dị na nzuzo maka nzuzo nzuzo zuru oke.
Iwu banyere igwefoto zoro ezo:
Mgbe ụfọdụ, inwere ike iji igwefoto zoro ezo zoo mkpa. Tupu ị wụnye igwefoto ahụ, ajụjụ ụfọdụ gbasara omume na iwu nwere ike iju gị anya. Ndi ese foto zoro ezo? Ọ ga-agwa m isiokwu nke ọnụnọ nke igwefoto zoro ezo? Na steeti 50 niile nke United States of America, iji kamera zoro ezo bụ ihe iwu kwadoro. Mgbe ọ bụla n’ebe ọha na eze nọ, iwu kwadoro ka iji igwefoto zoro ezo dekọọ vidiyo nzuzo. Ebe ndị a bụ ogige ntụrụndụ, ụlọ nri, ebe a na-ere ahịa, ọfịs, ebe a na-azụ ahịa, na n'okporo ámá obodo. Iwu banyere ikike ezi uche dị na nzuzo ka etinyekwara iji igwefoto zoro ezo na mpaghara ọha. Agbanyeghị, Maine, South Dakota, Hawaii, Minnesota, New Hampshire, Utah, Kansas, Michigan, Delaware, Arkansas, Georgia, Alabama, na California mee ka onye ọrụ gị nwee ikike ederede ka ịnwe igwefoto zoro ezo na-ele ha. Steeti ndị a anaghị ekwe ka iji igwefoto zoro ezo zoro ezo na ebe ndị isiokwu ha na-echeghị ndekọ ndekọ na-enweghị ikike.
Dịka ọmụmaatụ, Michigan na-ahụta na ọ dị njọ ịwụnye ma ọ bụ jiri igwefoto zoro ezo na-enweghị ikike.
Nlebe anya N'ụlọ:
Anyị niile egela ntị maka igwefoto ngwa ngwa igwefoto ndị ahụ na-eji ledoo nannies gị ebe ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ ịzụ ahịa. Ọ na -ekwukarị mgbe ọ bụla, ọ bụ iwu na United Steeti iji igwefoto zoro ezo wee kpuchie ihe nlere anya nke ụlọ gị na-enweghị ikike nke onye ị na-edeba. Ọ bụ ya mere ojiji a na-eji ngwa ngwa ngwa ngwa eme ihe ngwa ngwa ji agbakarị ndị nne na nna na ndị na-elekọta ụlọ na-arụ ọrụ na mpụga ụlọ n'ehihie. Tupu ị debe igwefoto nanny n'ụlọ gị maka nchedo ụmụaka gị na ezinụlọ gị, ịkwesịrị ịgụ iwu na steeti gị.
Maka usoro nchekwa dị elu, ịnwere ike ịgwa onye ọka iwu gbasara ụzọ akọwapụtara iji kamera gị.
Otu ọdịiche dị mkpa, ị kwesịrị iburu n'uche gị, bụ ihe dị iche na ndekọ ọdịyo na ndekọ vidiyo. N'ọtụtụ steeti, ọ bụ mmebi iwu idekọ vidiyo igwefoto zoro ezo na mpaghara ebe ndị ị na-achị nwere atụmanya ezi uche dị na nzuzo. N'ụlọ gị, mpaghara ndị a nwere ike ịgụnye ime ụlọ ịsa ahụ na ime ụlọ ma ọ bụrụ na ndị ị na-achị bi n'ụlọ gị.
E zoro kamera n'ihe nkedo, ihe nnụnụ, wdg. Ngwaọrụ ndị a nyere nne na nna obi iru ala mgbe ụmụ nwanyị na-abịa lekọta ụmụaka. Dịka ị nwere ike ịkọwa, ihe kachasị mkpa ị ga-eji igwefoto na-elele ga-elekwasị anya n'ihe gị. Ohaneze, izochi cam-cam ndị a bụ ihe iwu kwadoro. Otu ihe a na-aga na usoro onyunyo dị na mpụga nke ụlọ gị na akụ gị. Otu ị ga - esi jiri igwefoto mee ihe gbasara gị ga-akachasị anya n'okwu ikpe ụlọ ikpe. Ntọala ya bụ: nweere onwe gị iji igwefoto zoro ezo n'ụzọ ọ bụla ị na-ahụ na ọ dabara n'ụlọ gị ma ọ bụrụhaala na ndị ọbịa gị nwere atụmanya nzuzo nke nzuzo. N'ụlọ gị, ebe ndị a nwere ike ịnwe ime ụlọ ịsa ahụ ma ọ bụ ime ụlọ ma ọ bụrụ na isiokwu a na-ebi na ya.
Nnyocha ụmụaka, n'ụlọ ọzọ abụghị iwu ọ bụrụ na nwa gị gafere n'ụlọ enyi, n'agbanyeghị na ọ bụ maka nchekwa nke ụmụ gị.
Ọ bụghị steeti niile machibidoro iji igwefoto zoro ezo na ebe isiokwu nwere ike ịtụ anya ihe nzuzo dị mma. Ma nke ahụ apụtaghị na ị kwesịrị iwere ya na ọ bụ ihe iwu – ma ọ bụ omume ọma na-eju afọ – ka ịdekọ ihe omume nke mmadụ na-enweghị ya ikike ọ bụla ebe nzuzo.
Ọzọkwa, buru n’uche na ọ bụ iwu na United States ịdekọ vidiyo ma ọ bụ ọdịyo na kọwaa ihe kpatara mmebi ozi ma ọ bụ nzube ọjọọ. Agbanyeghị na ị na-agbaso iwu ndị ọzọ na-achịkwa nchedo nzuzo na steeti gị, ọ dị mkpa iburu n'uche na ị ga-ahapụ ikike gị ma ọ bụrụ na ị na-eme mpụ. Maka ịchọpụta igwefoto zoro ezo, ịnwere ike iji ngwaahịa anyị dị mma, maka nkọwa ndị ọzọ pịa ebe a.
Ka o sina dị, mgbe anyị na-ekwu maka ụlọ, ọ bụrụ na ị na-enye ndị ọbịa Airbnb ma ọ bụ ụdị ndị ọzọ ị nabatara n'ụlọ gị iwu, ezighi ezi ịnyocha ha. Nkebi ahịrịokwu "atụmanya ezi uche dị na nzuzo", iwu a na-egosi na igwefoto zoro ezo abụghị iwu na ọnọdụ onwe ya, gụnyere ime ụlọ na ime ụlọ ịsa ahụ. Ọ bụrụ n ’ịnwere onye ọbịa ikuku Airbnb, agaghị anabata ya itinye igwefoto n’ụlọ ebe a na-anabata ndị ọbịa. Ọ bụrụ n ’ị ga-eche na ịchọrọ ịtọbe igwefoto na mpaghara ndị a, i ji ndị ọbịa ụgwọ ilele ha. Agbanyeghị, nke ahụ bụ okwu dị iche ị ga - emeghachite na Airbnb na ndị ọzọ.
Ọnọdụ igwefoto zoro ezo igwefoto:
Isetịpụ igwefoto n’ụlọ gị bụ otu ihe, kedụ maka idebe ya n’ebe ọha? Ọtụtụ mgbe, iji ese foto, na ebe ọha dị ka ụlọ ahịa na-ere ahịa, ụlọ nri, ma ọ bụ ebe azụmahịa ndị ọzọ bụ nke iwu. Ndị na-apụ apụ na ebe ọha na eze na-ahapụlarị nzuzo ha. Ọ bụkwa iwu dị idekọ vidiyo nzuzo na mpụga n'ime ụlọ ahịa, n'okporo ámá obodo, ogige, ma ọ bụ n'ámá. Atụmanya kwesịrị ekwesị nke ụkpụrụ nduzi na-emetụta ọnọdụ maka eserese nke igwefoto zoro ezo n'ebe ndị mmadụ. Ọ bụ iwu na-akwadoghị ịdekọ vidiyo nzuzo n'ime ụlọ mkpuchi, ime ụlọ na-agbanwe, ebe izu ike, ime ụlọ, na ebe ndị ọzọ nzuzo.
Igwefoto zoro ezo na-arụ ọrụ:
Ma gọọmentị etiti na United States nke America ma ndị gọọmentị steeti enweghị iwu na-achịkwa igwefoto zoro ezo na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịtọ igwefoto zoro ezo n’ebe ị na-arụ ọrụ, iwu kwadoro gị ịme ya. Ka ọ dị ugbu a, ndị nwe ụlọ ọrụ na United States na-enwekarị ikike iwu ha ma ọ bụrụ na ha etinye igwefoto zoro ezo n'ọfịs ha na ebe ndị ọzọ ha na-azụ ahịa. Iwu ejighi ndị nwe azụmaahịa ịgwa ndị ọrụ ha banyere igwefoto zoro ezo, n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị azụmaahịa na-ahọrọ ịgwa ndị ọrụ ha banyere igwefoto zoro ezo. Nweta site na ntuziaka nke National Labour Relations Board guzobere, nnukwu ụlọ ọrụ-ọkachasị ndị na-ewere ndị ọrụ otu - na-ekwukarị ndị ọrụ azụmahịa kwesịrị ekwesị tupu oge erube iwu na-achịkwa ojiji nke igwefoto zoro ezo. Mana ọzọ, enwere ọtụtụ gọọmentị etiti ma ọ bụ steeti akọwapụtara nke chọrọ ha ime ya. Dịka onye ọchụnta ego, mgbe ịnwere ikike iwu iji tọọ igwefoto zoro ezo na azụmaahịa gị iji lelee ọrụ ndị ọrụ gị. Ndị ọrụ ahụ nwere ikike ezi uche dị na nzuzo na ọfịs ha na ebe ọrụ ha. Ọ bụrụ n ’imebi nzuzo nke ndị ọrụ gị n’ọrụ ahụ, ha nwere ikike iwere gị iwu. Ọtụtụ ndị nwe ha na-agwa ndị ọrụ ha maka iji igwefoto na ebe ha ka enyere ha obi ike iji gosipụta omume ha kacha mma, mana ọ bụghị iwu.
M na-akọwa ahụmịhe nke m gbasara iji igwefoto zoro ezo n’ebe ọrụ. Agụrụ m akwụkwọ na duclọ Akwụkwọ Ndị Ọzụzụ, Chakwal, Pakistan nke bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ na-eduga na obodo ahụ. Onye nwe ụlọ akwụkwọ ahụ jiri kamera zoro ezo n'ime ụlọ klaasị ya na ụlọ ọrụ ndị ọrụ wee nyochaa ọrụ ndị nkuzi yana ụmụ akwụkwọ. Site na idobe igwefoto zoro ezo na klaasị na ime ụlọ ndị ọzọ nke ụlọ akwụkwọ ahụ, Onye isi ụlọ ọrụ na onye nwe ụlọ akwụkwọ ahụ nyochara ahụhụ ụmụ akwụkwọ na-ata ahụhụ n'ihi na ụfọdụ n'ime ndị nkuzi malitere inye ụmụ akwụkwọ ntaramahụhụ nkịtị. Ha chọkwara ime ka ndị nkuzi ha mụrụ anya n’oge ọrụ ha iji bulie ogo agụmakwụkwọ. Yabụ, ọ bụkwa iwu ebe a na Pakistan.
Nlele anya site na ngwaọrụ ndị ọzọ:
Ihe nlere onyonyo bu ihe ozo di ike iji lelee ndi oru gi n’ulo oru gi mgbe ị noghi. A kọwapụtaghị iwu nke onyunyo igwefoto dịka iwu ndị metụtara ihe onyunyo. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka ịdekọ mkparịta ụka mmadụ na mmadụ ma ọ bụ kpọọ ekwentị, iwu gọọmentị etiti United States na-akọwa na ọ dịkarịa ala, a ga-eme ka ị mara ihe na ikike ịdekọ. A maara ya dịka nkwekọrịta nke otu onye bụ otu esi ekwu ọtụtụ steeti United States America taa. California, Connecticut, Florida, Illinois, Maryland, Massachusetts, Montana, New Hampshire, Pennsylvania na Washington bụ steeti ndị nkwenye mmadụ abụọ na-achị. Hawaii na-anabata ikike otu maka ihe a na-ege, mana ọ bụrụ na ngwa ndekọ a dị na nzuzo ọ chọrọ nkwenye ndị otu abụọ.
Gosiputa ikike Gị:
Ọ bụrụ n ’ị na-eche na ịnọ n’okpuru onyunyo vidiyo na-ezighi ezi, ị nwere ike nweta ihe ịchọpụta igwefoto ka ịnweta kamera zoro ezo, nchinchi ọdịyo na ngwaọrụ nsuso Kpoo ngalaba nlekota onyunye iji zụta otu n'ime ihe a dika ego ekwesighi, pịa ebe a. Karịsịa, ịnwere ike ịkụziri onwe gị ụzọ isi tinye igwefoto zoro ezo a. Ọ bụrụ n ’ị bụ onye ọbịa nke Airbnb, ị nwere ike ịgwa ndị ọbịa bịara Airbnb. Ihe ndị yiri nke a na-aga maka hotels. Shouldkwesịrị ịma banyere eziokwu ahụ bụ na mgbe igwefoto zoro ezo bụ nke iwu yana mgbe ọ na-akwadoghị iwu.
Iji igwefoto zoro ezo, n'ime ogige, ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ, kọleji, ebe azụmahịa, ọfịs, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, bụ ihe iwu kwadoro mana n'ime ụlọ ime ụlọ, ebe ịsa ahụ, na ebe ndị ọzọ iji nzuzo zoro ezo bụ ihe iwu megidere. Cameradebe igwefoto zoro ezo na nzuzo nke onwe gị ma ọ bụ ebumnuche ọjọọ na-eme ka ojiji nke igwefoto zoro ezo ezighi ezi.
Ma ị bụ onye isi ụlọ ọrụ ma ọ bụ azụmahịa ma ọ bụ ịbụ onye ọrụ ma ọ bụrụ na iwu iwu ka na-edocha anya maka gị ma ị nwere nchegbu ọ bụla na ntinye na iji igwefoto zoro ezo na ndị nledo? Soro onye ọka iwu ma ọ bụ ọkachamara ọka iwu ga - enyere gị aka ịghọta otu esi eme gị igwefoto kpuchie gị n'uzo iwu. Iji chọta igwefoto zoro ezo nke onwe gị ma ọ bụrụ na ị nọ na ndozi n'ihi nyocha zoro ezo, biko gaa na ebe nrụọrụ weebụ anyị maka ngwaahịa dị mma. Ngwa dị elu iji chọpụta igwefoto zoro ezo dị.
Igwefoto zoro ezo SPY kachasị mma maka SPY maka Ndị Ọrụ Nyocha
Nnyocha na-atụ aro iji CCTV kamẹra iji nyochaa ọrụ ọrụ na-abawanye uru yana yana nrụpụta nke Ndị Ọrụ. E nwere ihe ole na ole kpatara òtù dị iche iche ji eme nke ahụ. Nke mbu, igbochi ime ihe ike obula, izu ohi na mpu ndi ozo nke puru ime n’enweghi aka. Nke abuo iji chebe mmasị nke azụmahịa site na ikpuchi arụmọrụ n'ime ụlọ njikwa ahụ iji hụ na gburugburu ebe dị mma ma dị mma ma ọ bụrụ na ihe a na-atụghị anya ya mere azụmahịa nwere ike ịnye ihe akaebe n'ụdị ihe nkiri CCTV nwere ụdị akara ụbọchị na oge nke ihe omume ahụ. Nke ato bu ihu oru, nkwurita okwu na oru ndi ozo nke gha enyere gi aka inyocha oru nke ndi oru. Ọ bụrụ na ị na-agba ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ebe a bụ igwefoto 10 CCTV kachasị mma ịkwesịrị iji maka nyochaa ndị ọrụ gị.
Iji jide n'aka na nchekwa kachasị mma, ụlọ ọrụ ọ bụla ga-achọ ịpụ maka nkọwa ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ mpụ na-arịwanye elu n'oge a. Igwe foto CCTV nkịtị dị mfe iji anya nkịtị jide gị ka ị wee nwee ike ịga maka ihe ọhụụ, na atụghị anya ịbụ igwefoto nche ụbọchị ndị a. Ugbu a, ọ bụrụ na ị nọ n'ihu ụfọdụ nchekwa, ma ọ bụ onye ọrụ nyocha nke chọrọ ilekwasị anya n'ihe niile ma ghara ime ka ọ pụta ìhè. SPY-306 bụ naanị ihe maka gị, igwefoto ya zoro ezo etinye n'ime chaja, yabụ ị nwere ike idowe ya n'ime oghere n'ụlọ onye ọrụ wee hụ ihe ha na-eme kwa ụbọchị. Ọ na-abịa na igwefoto ọhụụ n'abalị dịka nke ahụ nwere ike idekọ ya na mkpebi 4K ijide n'aka na ị nwere ike ijide nchebe zuru oke ọbụlagodi na ọkụ kacha ala dị. ị nwekwara ike ịhụ ihe osise dị ndụ na ndị ọrụ gị site na ebe ọ bụla zụta site na iji ngwa Smartphone.
SPY297 - Igwefoto elekere WIFI:
Ka oge na-aga, ndị ohi, ndị ohi, na ndị omekome a na-akpọ ndị omekome arụgharịala uche ha. Ha maara n'oge ugbu a na oge ọ bụla ha mere ihe iwu na-akwadoghị n'ime ụlọ azụmaahịa ahụ, ha kwesịrị ibu ụzọ gbaa mbọ hụ na ọ nweghị onye nwere anya na ha, nke a na-eme ka igwefoto CCTV dị mfe nfe na anya. N'agbanyeghi ilebara ọnọdụ a anya, onye nche ọ bụla ma ọ bụ onye nlegide anya ga-achọ ijide n'aka na ọ nwere akụkụ ọ bụla na - enweghị isi. SPY297 na-emere gị naanị ọrụ ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ahụ, ma ị bụ onye na-arụ ọrụ na ngalaba nchekwa ma ọ bụ naanị onye ọrụ ọfịs nkịtị ma ọ bụ onye ọrụ gọọmentị. Can nwere ike itinye ngwa ngwa a dị ịtụnanya n'akụkụ ọ bụla nke ọfịs gị ma jide n'aka na ihe niile fọdụrụ n'okpuru nchịkwa ka ihe a na-abịa na mmegharị dị iche iche dị ka redio elekere mkpu, redio na-ekwu okwu na-enweghị ezigbo igwefoto nchebe dị elu! Na nkenke, ọ bụ ezigbo obere enyi gị zuru oke maka ebe ọ bụla. Ewezuga nke a ị nwere ike itinye nke a na tebụl nke ndị ọrụ ma nyochaa ọrụ ha kwa ụbọchị. Tinyere ilele ọrụ na izu ohi okwu otu nwere ike soro nkwukọrịta na akparamaagwa nke ndị ọrụ ya na ndị ahịa na ndị ahịa. Ọ na - enyere gị aka ileba anya n'ụdị ọrụ na nraranye nke ndị ọrụ na ịchepụta ụgwọ na atụmatụ mkpali maka ndị ọrụ.
Wi-Fi abụrụla akụkụ bụ isi nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngalaba, ụlọ, ma ọ bụ ebe ọha na eze nọ n'ụbọchị ndị a. Ọ dị ka anyị enweghị ike ịrụ ọrụ ụbọchị anyị na-enweghị teknụzụ ikuku a n'agbanyeghị nsogbu nsogbu nke ịrị elu nke mpụ n'akụkụ ụwa niile. Lee ka ọ ga - esi dị egwu ma dị nhịahụ maka ndị ọrụ Monitor ma ọ bụrụ na obere ihe a nke nwere ike inye ntụrụndụ maka elekere na elekere malitekwara inye nchekwa maka otu oge ahụ? Ejikọtara uche gị ziri ezi, SPY296 na-arụ ọrụ ahụ. Ọ nwere ike idekọ ntọala dị iche iche dịka 4K / 2K na ọbụlagodi 720p dị ka usoro mkpebi gị chọrọ. Ọ nwere ike ịkwado kaadị SD ruo 128 GB ma nwee ike itinye ya ebe ọ bụla n'ime ụlọ ahụ iji rụọ ọrụ dị ka Wi-Fi Router ma n'otu oge ahụ na-enye gị ohere iji nyochaa ọnọdụ niile nke oge ọ bụla site na nyocha ọ bụla ejikọtara ya. ! Yana ichebe nzukọ site na ajọ ihe na arụ ọrụ nke ndị ọrụ na ndị ọrụ ya, ọ na - enyekwa aka n'ịkwado ma chekwaa onye ọrụ na ikike ndị ọrụ yana ya na onye ọrụ rue ikike nzukọ.
SPY263 - Onye nkwupụta Bluetooth SPY SPY Hidden Cam:
Cheedị ma ọ bụrụ na ịnwere ụlọ ahịa egwu, ihe niile na-aga nke ọma, ị nwere ebe nchekwa zuru oke yana onye nche na-anọdụ ala n'azụ mana nke abụọ nke onye ohi batara na ihe mbụ ị hụrụ ka ọ na-agba mgba bụ igwefoto nchekwa. Boom, ndozi gi nile ghabara ntụ. Iji zere ụdị omume a ejighị n'aka, m kwenyere na ị ga-enweta ihe dị ka SPY2K3, ugbu a ị ga-ajụ m ihe pụrụ iche gbasara ya. Na, azịza dị mfe bụ, ọ dabara na mkpa gị, ọ na-adabarakwa ndị ahịa gị! Nwere ike iji ngwa a, mee ndị mmadụ abata n'ụlọ ahịa gị maka ịzụta ihe ma ọ bụ lelee ihe ị nwere na ntanetị ma na-eleghara onye ọ bụla nwere ike inye gị nsogbu shark n'ụzọ ọ bụla dị mkpa. Yabụ, igwefoto a na-ekwupụta ọhụụ abụghị naanị na-enye njirimara dị mma kamakwa ijide ọrụ dị njọ na nke zoro ezo nke ndị ọrụ na setịpụrụ agụmakwụkwọ na nke ozi. Otu nwekwara ike debe nzukọ ọgbakọ na nnọkọ iji chọpụta ihe ọjọọ nke ndị ọrụ yana ndị ọchịchị; Igwefoto a bụ ezigbo ebe dị mma iji dozie ihe ngosi na usoro nlere anya yana ọdịyo. Nwere ike ịkpọ egwu na ngwaọrụ a site na Bluetooth nke ekwentị gị ma ọ bụ laptọọpụ gị mgbe ị na-emekwa ọkwa dị elu nke nyocha nchekwa kwa sekọnd kwa ụbọchị!
SPY204 - AKW CKWỌ AKW CKWỌ AKWYKWỌ NKWỌ: CYLINDER:
N’ime mmezu nke obi onye omekome, ndi otu nche kwesiri ijide n’aka na nchekwa ha nyere bu ihe ịtụnanya ma buliekwa ya elu. Designsdị CCTV ndị a na-ahụkarị abụrụla ihe juru ebe niile n’ụbọchị ndị a na ụzọ ha si aga, anya nkịtị nwere ike ịmata ha ka ọ bụrụ na ha na-enyocha ihe niile. Kedu ihe kpatara SPY204, ya na Cylinder imewe ya na teknụzụ njikọta ikuku, ị nwere ike tinye ya n'akụkụ ọ bụla nke ebe ọ bụla ọ bụrụ ụlọ, ọfịs ma ọ bụ nke ihe omume iji zuo ike na azụ wee mee ihe n'ihu mmadụ. ọbụna na-eche echiche banyere ime mpụ ọ bụla edoghị anya na ememe ahụ. Ha amaghi ihe biara wee tigbuo ha mgbe i jiri obere badass a wee lee ha anya.
Na mbu anyị ekwuola banyere etu a ga-esi jiri wijetị Wi-Fi rụọ ọrụ nke ọma maka ịnweta ndị na - ekwu ha na nzuzo na - echekwa nche nke ebe ọ bụla na - enweghị ịchọpụta ọ bụla. Ọ bụrụgodị na anyị ga - eme ka nchọpụta ahụ dịkwuo ntakịrị. Ghara ime ma ọ bụrụ na anyị ga - atụgharị igwefoto ka ihe bụrụ ihe ndị mmadụ na - agaghị achọpụta, ọ pụtara na m ga - enwe ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na a na - ele ha ma ọ bụ na - eleghị ya? Nke ahụ bụ mgbe SPY165 mere ntinye ya. Site na igwefoto na-agbagharị 180-ogo na njikwa ihuenyo 1080p. Ekwenyere m na ngalaba nchekwa ọ bụla ga-achọ ngwa a n'akụkụ ha chọrọ n'ihi na ihe a nwere ike ime ka nchedo nke ndị ahịa ma ọ bụ ndị ahịa ọ bụla na-enweghị ịbanye na otu onye nkịtị. Ha na-ahụ na ma onye njikwa ma nwa okorobịa ahụ nọ n'azụ nke na-enyocha ma nọrọ jụụ n'enweghị nchegbu!
SPY088 - WIFI AIR FRESHENER HIDDEN CAMERA NA AK VIDEOKỌ VIDI:
Agaghị echekwa klaasị ọ bụla ụlọ ahịa, ọfịs, ma ọ bụ ụlọ nkịtị mgbe ị na-etinye ihe nchekwa niile. M pụtara wires n'akụkụ niile n'akụkụ nkuku n'akụkụ igwefoto na-agbagharị dị ka a beesụ adịghị enye anya dị mma na nsọtụ nke ọnụ ụlọ ọ bụla nke ngalaba, ụlọ ahịa, ụlọ ma ọ bụ nnukwu nnukwu ụlọ ahịa. Yabụ, kedu ihe ị ga - eme iji hụ na ntụpọ gị adịghị ahụkebe dịka ọ nwere ike na - enyeghị isi nchekwa gị ma ọ bụ onye na - ahụ maka ọnọdụ a niile oge siri ike? Ọ dị mfe, nweta ngwa ahịa a dị ịtụnanya SPY088. Ugbu a, olee otu nke a si arụ ọrụ? Dị mfe ka mmadụ nwere ike ịnweta, naanị jikọta ya na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ ọ bụla ị ga-enyocha ime ụlọ ahụ ma ọ bụ ebe ị ga - arụ ọrụ ya ka ọ bụrụ igwefoto CCTV ọ bụla ọzọ. Nke a bụ nnukwu ihe maka idobe anya na obere ụlọ dịka ime ụlọ, obere ụlọ, kichin na ihe ndị ọzọ. Ọ gaghị emebisị anya nke ebe mana ọ ga - adịgidekwa dị ka a naghị achọpụta ya dịka o nwere ike ma otu a, nchekwa kacha mma bụ nke anaghị enweta n'anya n'agbanyeghị na - eme ka ọ bụrụ na ị na - eku ume na gburugburu ebe nchekwa!
SPY175 - WIFI PANARA BANK CAMERA:
Ọ bụrụ na ị bụ azụmahịa nke na-agagharị na ndị na-eche ya nche oge niile, mana ụjọ na-atụ ya n'oge nzukọ na ihe ya, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bụ onye nọ ebe ọ chere na o nwere ike ịnwe onye chọrọ imerụ ya ahụ. Ya onwe ya gha acho ijide n'aka na onweghi onye choro ime elu ya. Na SPY175 bụ ezigbo enyi zuru oke maka gị, ngwa a dị ugbu a bụ igwefoto Wi-Fi na-achịkwa azụ nke na-akwado kaadị SD ruo 128 gab, nwere ike ịrụ ọrụ na ọnọdụ ọkụ na ndekọ zuru oke zuru oke ruo 4K. Nke ahụ abụghị naanị nzuzu!? Ugbu a ekwesighi ka idobe azụmahịa gị ka ọ bụrụ nke zoro ezo na nchekwa gị. Ha nwere ike na-elekọta gị ọbụlagodi mgbe ị nọ n'ime ụlọ ma ọ bụ ụkwụ site na ha iji mesie nchebe nke ọkwa enweghị enweghị nchekasị ọ bụla. Na mgbakwunye, onye ọ bụla kwesịrị ikwu na ekwentị ha ụbọchị ndị a nke mere na onye ga-anwa anwa nwee obi abụọ banyere ihe dị ka akụ akụ?
Peoplefọdụ ndị mmadụ na-echegbukwa onwe ha banyere etu nchekwa ha siri dị, n'agbanyeghị na ha nwere igwefoto na ngwa dịka ekwuputara ebe ahụ na ndepụta niile gbara ha gburugburu. Ha chọrọ onye ga-eme ka ọ dị ha ka anọrọ ha n’akụkụ ha anaghị egosipụta. Ugbu a ebe ọ bụ na ekwuputala teknụzụ Cloak ma nke ahụ bụ ihe na - agaghị emecha mee ọ bụ ezie na ihe ekwuputara bụ ọkwa nke ngwa dị ịtụnanya dị ka SPY032. Ihe obere ihe a na - eme, ọ rapara n'ahụ gị dịka uwe gị ma nwee obi ike na ọ bụ nwoke ahụ na - enyocha ya ọkwa nchekwa ọkwa ọ bụla nwere ike ịchọrọ, ihe nzuzu a na batrị nwere ike ime ka ọ gbanye ma na - edekọ oge niile. Ruo oge 70 awa nke ahụ kwa na oge elekere 100 nke dị oke egwu n’ezie. Igwefoto pinhole pere mpe bu ihe i nwere ike izo ebe obula obuna n’okpuru uwe gi ma obu ihe o ga - eme n’iru gi ihu na inwere ihe nzuzo zuru oke ma nye gi anya zuru oke na ihe obula.
Anyị ekwuola n’elu gbasara otu ị ga - esi chekwaa ụlọ ahịa ọ bụrụ na ị bụ onye na - egwu egwu na - ere ibụghị ụdị mma ya na ụdị ya. Ọ bụrụ ezie na ọ bụrụ na ị bụ onye na-egwu egwu na-abụghị n'ezie inwe ụlọ ahịa egwu? Ha-ha, nke ahụ bụ eziokwu. Echegbula onwe gị, SPY208 ekpuchiwo gị ihe niile? Ezubere nke a maka nzube ntụrụndụ yana ebumnuche nchekwa ka ị nwee ike itinye oge gị n'ịhụ na ihe ọ bụla dị n'okpuru anya onye na-achịkwa ya mgbe ị na-ejikwa oge zuru oke site na iji egwu na egwu kachasị amasị gị! Ugbu a ihe ọzọ nwere ike ịka mma karịa ịnwe egwu na-atọ ya ụtọ n'ahụ gị n'ahụ ka ị ghara ịtọ ụtọ nke ịbụ onye a wakporo na mpụta ebe ọ bụ na enyi na enyi ga na-enye nkọwa niile na-eme gburugburu gị na onye ahụ nọ kwụọ ụgwọ n'otu oge ya na igwefoto ndekọ mkpebi 4K n'ezie. Ọ bụ obere ihe zuru oke nke ị nwere ike iji mee ihe n’oge ọ bụla n’ihi ọdịdị ya na nkecha ya. Onweghi onye ga-eche na ihe dị otu a ga-eji ebumnuche nchekwa n'agbanyeghị na ọ dị oke mma!